Ithegi: isp | Martech Zone
Yintoni iAdilesi yedilesi ye-IP kwaye ingaba amanqaku akho e-IP aluchaphazela njani ukuhanjiswa kwe-imeyile?
NgoLwesibini, nge-8 kaDisemba ngo-2020 NgoLwesithathu, uDisemba 30, 2020 UBob Croft
Xa kuziwa ekuthumeleni ii-imeyile kunye nokwazisa ngemikhankaso yokuthengisa nge-imeyile, inqaku lombutho wakho we-IP, okanye igama le-IP, kubaluleke kakhulu. Ikwabizwa ngokuba ngamanqaku omthumeli, igama le-IP lichaphazela ukuhanjiswa kwe-imeyile, kwaye oku kubalulekile kwiphulo le-imeyile eliyimpumelelo, kunye nonxibelelwano ngokubanzi. Kule nqaku, sivavanya amanqaku e-IP ngokweenkcukacha kwaye sijonge indlela onokugcina ngayo igama elomeleleyo le-IP. Yintoni i-IP Score
Yintoni ukufudumala kwe-IP?
NgoLwesithathu, Matshi 25, 2020 Lwesine, Matshi 26, 2020 Douglas Karr
Ukuba inkampani yakho ithumela amakhulu amawaka e-imeyile ngokuhanjiswa, ungagijimela kwimicimbi ethile ebalulekileyo kunye nabanikezeli beenkonzo ze-intanethi abahambisa zonke ii-imeyile zakho kwifolda ye-junk. I-ESPs zihlala ziqinisekisa ukuba bathumela i-imeyile kwaye bahlala bethetha ngamanqanaba aphezulu okuhambisa, kodwa oko kubandakanya ukuhambisa i-imeyile kwifolda ye-junk. Ukuze ubone ukuhanjiswa kwebhokisi lakho lokungenayo, kuya kufuneka usebenzise iqonga lesithathu elinje
Ukhuseleko lwe-imeyile kunye nokuSebenzisa kwiHlabathi liphela
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 6, 2013 NgoMvulo, Meyi 6, 2013 Douglas Karr
Kutshanje sizifumene sineengxaki kunye nomboneleli wethu we-imeyile xa siphinda sazisa ezinye iidilesi ze-imeyile ezindala kwiakhawunti yethu. Itoni yazo ibhajisiwe, sifumene izikhalazo ze-SPAM kwaye umntu othile wayenomsindo kakhulu kangangokuba banxibelelana nomboneleli wethu buqu ukuze bakhalaze. Siye sanqanda ukususa iidilesi ze-imeyile kwiakhawunti ngokuhambelana nesicelo esivela kumnikezeli we-imeyile. Iinkcukacha-manani ezikule infographic ezivela kwiSampulu yee-imeyile zibonisa ngqo